‘लिभिङ टुगेदर’ : सुरा, स्न्याक्स र सेक्सको त्रिवेणी – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
‘लिभिङ टुगेदर’ : सुरा, स्न्याक्स र सेक्सको त्रिवेणी
आखिर उपन्यास भनेको के हो ? पुस्तकको आकारमा लेखिएको काल्पनिक गद्य रचना जसमा पात्र र घटना समावेश हुन्छन् र सत्यताको केही अंश वा आधार पनि मिसिएको हुन्छ । उपन्यासमा लेखकले सविस्तार आफ्नो मनका भाव पोख्न सक्छ, कल्पनाका पखेटा क्षितिजपारिसम्म फटफटाउन सक्छ, अनुभवका इन्द्रेणी फिँजाउन सक्छ र जीवनलाई अनेक तह र गहिराइसम्म पस्किन सक्छ । जसमा जीवनको छायाँ हुन्छ त्यस्तो उपन्यासले पाठकलाई सोझै तान्छ । पछिल्लो चालीस वर्षदेखि साहित्य लेखनमा सक्रिय गोविन्द गिरी प्रेरणा आफ्ना पाठकहरूलाई नयाँ उपन्यास उपहार लिएर आएका छन्, लिभिङ टुगेदर (असार २०७५) । धेरै कल्पना र केही यथार्थको घुलन रहेको यो उपन्यास २१६ पृष्ठ लामो छ ।
कुमारका अति मिल्ने साथी हुन्छन्, सुनिल चापागाईं र हरि खड्का । उनीहरू एक आपसमा कुमारलाई भट्टे, सुनिललाई चापे र हरिलाई खोंडे भनी वोलाउने गर्छन् । यस्तो सम्वोधन अनौठो सुनिन्छ । तीनजना भेट भएपछि मातुन्जेल रक्सी खान्छन् र उनीहरू वीच रक्सी र केटी वाहेक अरु कुराकानी हुँदैन । समयक्रममा सुनिलले पनि एकजना युवती फेला पार्छ र लिभिङ टुगेदरमा वस्न सुरु गर्छ । तर केही समयपछि युवती उसलाई छाडेर कहिल्यै भेट नहुने गरी भाग्छे । यस सम्बन्धमा हरि असफल पात्र देखाइएको छ जसले सबैतिरवाट हार खाएपछि रत्नपार्ककी टाटीसित आफ्नो यौन प्यास मेटाउँछ । यसक्रममा उसलाई यौनरोग पनि लाग्छ, जुन पछि निको हुन्छ । कथानक अन्तिमतिर पुग्दा हरिले नाटकीय रूपमा आत्महत्या गर्छ । किन ? उपन्यासले यसवारेमा केही पनि भन्दैन ।
पिताले वोलाएपछि कुमार एकाएक वीरगञ्ज पुग्छ तर काम विशेषले पिता काठमाडौं जानु परेकोले डिएसपी ठाकुरले कुमारको सेवा सत्कारको जिम्मा पाउँछन् । उनले कुमारलाई हेटौंडा, वीरगञ्ज, रक्सौल आदि ठाउँ पुर्याउँदछन् । सवै ठाउँमा रक्सी, सितन र युवती मात्र संगत हुन्छ । सिमानापारिको सन्दर्भमा निर्दाेष गाउँले नेपाली वालाहरूलाई कसरी सिमाना कटाएर वेचिन्छ भन्ने, नेटवर्क सक्रिय छ भन्ने तथ्यको सांकेतिक वर्णन उपन्यासकारले गरेका छन् ।
उपन्यासको अन्त्य झनै नाटकीय छ । कृष्णाले आफूले काम गर्ने गुडविल इण्टरनेशनल म्यानपावरका सञ्चालक राधेश्यामलाई एक साँझ नगरकोट नाइट स्टे गर्न जाने प्रस्ताव राख्छे जुन उसले सहर्ष स्वीकार गर्छ । रिसोर्टमा उनीहरू वसेर खानपिन गरिरहेको वेला कृष्णाले भन्छे, ‘कति वियर मात्र खाने, किस पनि खाने कि सर ?’ अनि सारा बन्धन चुँडिन्छन् । उनीहरू अभिसाररत हुन्छन्, सम्भोगमा डुव्छन् । भोलिपल्ट कृष्णाले भन्छे, ‘सर, मैले मेरो शरीरको प्यास मेटाउन मात्र खोजेकी हुँ । मलाई प्रेममा विश्वास छैन । मलाई मात्र सेक्स चाहिएको हो, प्रेम होइन ।’ अनि उपन्यास सकिन्छ ।
उपन्यास विषयवस्तुको उठानप्रति गम्भीर देखिंदैन । उपन्यासमा थोरै पात्र छन्, त्यसमध्ये तीनजना युवकहरू छन् जो लिभिङ टुगेदरका रूपमा केवल सेक्स पार्टनर मात्र खोज्न इच्छुक छन् भने लिभिङ टुगेदरका लागि तयार जे जति युवती छन् ती सवैजना विपन्न र कथित तल्लो जातिका मात्र छन् । के नेपाली समाजमा हाल देखा परिरहेको लिभिङ टुगेदर अवस्थाको यथार्थ यही र यति मात्र हो त ? के यसका सकारात्मक पक्षहरू हुँदै नभएका हुन् त ? अथवा, केही पनि छैनन् त ? के लिभिङ टुगेदरमा बसेका कुनै पनि जोडीले सफल जीवन विताउन सकेका छैनन् त ? के लिभिङ टुगेदरको अवधारणा नेपाली परिवेशका लागि अभिशाप नै बनेको हो त ?
चालीस वर्ष साहित्य लेखनमा बिताएर अझै निरन्तर सक्रिय रहेका लेखक गोविन्द गिरी प्रेरणाबाट पाठकहरूले गम्भीर र स्तरीय लेखनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लिभिङ टुगेदर जस्तो उपन्यासले उनको स्तर खस्काउने काम मात्र गर्दछ ।
शनिबार,१४ पुस, २०७५ मा प्रकाशित//(Published on Saturday, December 29, 2018)